တရားမျှတစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါ။ အို!မိတ်ဆွေ...အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
တရားမျှတစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါ။ အို!မိတ်ဆွေ...
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၄ ညနေ
News Code : 784320
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ကြီးမား သော မွတ်(စ)လင်(မ) ဖေရ်ကာ(အုပ်စု) နှစ်ခုသည် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ဖေရ်ကာတစ်ခု၏ အမည်မှာ အဟ်လေ့သရှိန်းယို(ရှီအာ)ဖြစ်၍ ကျန်တစ်ခု၏အမည်မှာ အဟ်လေ့စွတ်န္နတ်၊အဟ်လေ့သစနွန်း(စွန်နီ)ဖြစ်သည်။ ရှီအာ(အဟ်လေ့သရှိန်းယို)၏ အဟ်ကမ်မေရှာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပဒေသများ) ကိုသဘောပေါက်စေရန် အတွက် ဥပဒေသများကို သိရှိ နားလည်စေရန်အတွက် နည်းလမ်းလေးသွယ်ကိုအသုံးပြုကြောင်း သိရှိရပေမည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် အခြေခံ အုတ်မြစ် “လေးခု” ပေါ် ၌ တည်ရှိပေသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ကြီးမား သော မွတ်(စ)လင်(မ) ဖေရ်ကာ(အုပ်စု) နှစ်ခုသည် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ဖေရ်ကာတစ်ခု၏ အမည်မှာ အဟ်လေ့သရှိန်းယို(ရှီအာ)ဖြစ်၍ ကျန်တစ်ခု၏အမည်မှာ အဟ်လေ့စွတ်န္နတ်၊အဟ်လေ့သစနွန်း(စွန်နီ)ဖြစ်သည်။
ရှီအာ(အဟ်လေ့သရှိန်းယို)၏ အဟ်ကမ်မေရှာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပဒေသများ) ကိုသဘောပေါက်စေရန် အတွက် ဥပဒေသများကို သိရှိ နားလည်စေရန်အတွက် နည်းလမ်းလေးသွယ်ကိုအသုံးပြုကြောင်း သိရှိရပေမည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် အခြေခံ အုတ်မြစ် “လေးခု” ပေါ် ၌ တည်ရှိပေသည်။
(ပထမ) ။ ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်။(قرآن مجید)
(ဒုတိယ)။ ။ စွတ်န္နတ်သေရစူလ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝါအာလေ
ဟီဝစလာမ်) နှင့် အအေမာယေမအ်စူမီး(န)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)
(၁၂ပါး)၏ဘဝ ကျင့်စဉ် ကျင့်ရပ် များနှင့် မကန့်ကွက်မှုများ။
သခင်မ ပါ ပါဝင်ပေသည်။
( سنت رسول(ص) فعل وقول و تقریر معصومین(ع))
(တတိယ)။ ။ အေဂ်ျမာ (اجماع) သာသနာ့သုခမိန်ကြီးများ၊ အများစု၏ ညီညွတ်
ပါဝင်ပေသည်။ သို့ သော် ပါဝင်ကြောင်း မသိကြပါ။
(စတုတ္ထ)။ ။ အကဲလ်(عقل) တည်းဟူသော ဆင်ခြင်တုံတရား, အသိဥာဏ်တို့
သို့သော် အမှန်တကယ်အသေအချာပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်လျှင် အေဂ်ျမာ သည် စွတ်န္နတ်သေရစူလ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟိုအလိုင်ဟေဝအာလေဟီဝစလာမ်) နှင့် အအေမာယေမအ်စူမီး (န) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) (၁၂ပါး) ၏ ဘဝကျင့်စဉ် ကျင့်ရပ် များနှင့် မကန့်ကွက်မှုများ၌ပါဝင်နေပါသည်။
အဟ်လေ့စွန္နတ်ညီနောင်တို့ အနေဖြင့်လည်း အဟ်ကမ်းမေရှာရီးအီး၊ သာသနာ့ဥပဒေသများကို သဘောပေါက်စေရန်အတွက် နှင့် ဥပဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အတွက်
(ဒုတိယ)။ ။ စွတ်န္နတ်သေရစူလ်(ဆွ) ။( سنت رسول(ص ) )
(တတိယ)။ ။ အေဂ်ျမာ (اجماع)သာသနာ့သုခမိန် ကြီးများ,အများစု၏ ညီညွတ်
(စတုတ္ထ) ။ ။ ကရား(စ်) (قیاس) ခေါ်အရာတစ်ခုအား ခြုံငုံပြီး မိမိအထင်ဖြင့်
ခန့်မှန်း ဆုံးဖြတ် ခြင်းတို့အပေါ်အခြေခံပေသည်။
၎င်းအပြင် အာဆွာဟဟ်တော်ကြီးများ၊သာဝကကြီးများ၏ ကျင့်စဉ်၊ကျင့်ရပ်ကို လည်းပဲသက်သေ အထောက်အထား အဖြစ်လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။
သို့သော် ဝမ်းနည်းစွာ မိမိလိုဘက်၊ လုပ်ရပ်အတွက်သာ အာဆွာဟဟ် တော်ကြီးများ၊ သာဝကကြီးများ၏ကျင့်စဉ်၊ ကျင့်ရပ်ကိုသက်သေ အထောက် အထား ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ ဘဝနှင့် မိန့်ချွေချက်များ ကိုအဟ်ကမ်းမေရှာရီးအီး သာသနာ့ဥပဒေသ များအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မိမိဘဝတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အဟ်လေစွန္နတ် အများစုသည် မနှစ်သက်ကြပေ။ မနှစ်မြို့ကြပေ။ တချို့သည်လုံးဝမသိရှိကြချေ။ ၎င်းတို့၏ အကြီးအကဲများကမျက်စိ၊ နားပိတ်ထားကြပေသည်။ သို့သော်လည်း၊ မည်သို့ဆိုစေ၊ လက်ရှိခေတ်ကာလ၌ အဟ်လေ့စွန္နတ်၏အကျော်အမော်သာသနာ့ပညာရှင် မောင်လာနာမောင်ဒူဒီဆပ်သည် “ရစာအေလ်လိုမာဆာ အေလ်” ဆိုသည့် စာအုပ်၌ ဤကဲ့သို့ရေးသားထား၏။ ((အကဲလ် အသိဥာဏ်ကို လက်မခံနိုင်သည့် အချက်မှာ အလုပ်တစ်ခုအား သန်းပေါင်းများစွာသော၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူသားတို့သည် အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်း၍ ပြုလုပ်ကြသည်။ သို့သော် သိန်းပေါင်းများစွာသော, လူသားတို့သည် မျက်လုံးဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, မျက် မြင်တွေ့ရှိချက်များကို တစ်နည်းဆိုရလျှင် စွန္နတ်၊ ဥပဒေသများ, ကျင့်ရပ်များကိုသိရှိ စေရန်၊ သဘောပေါက်စေရန် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ အိမ်တော်သူ၊ အိမ်တော်သား (အနွယ်တော်မွန်) များထံမှ ရယူရမည့် အချက်သည် မဖြစ်နိုင်ချေ။)) တစ်မျိုးဆိုရလျှင်၊ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) အား“စံ”နမူနာမှတ်ကျောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ မလိုပေဟူ၍ ဖြစ်ပေသည်။
မောင်လာနာမောင်ဒူဒီ၏ ရေးသားချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ထင်ထင်ရှားရှား၊ ပြတ်ပြတ်သားသား၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း၊ လေ့လာသုံးသပ် နိုင်သည်မှာ- အစ္စလာမ် ဥပဒေသများ, စွန္နတ်တော်များကို မိမိဘဝ၏ စံ မှတ်ကျောက်အဖြစ်၊ အာဆွာဘေရစူလ် (ရ.သွေ့)ကို သတ်မှတ်၊ ကျင့်သုံးနိုင်ကြောင်း သိရှိရပေသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်-အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ဘဝနှင့် မိန့်ချွေချက်များ၊ ကျင့်စဉ်ကျင့်ရပ်များထက် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ သာဝကကြီး များ၏ဘဝ၊ မိန့်ရပ်၊ ကျင့်စဉ် ကျင့်ရပ်ကို သတ်မှတ်အသိပြု၍ အလေးထားကြရန် ဖြစ်ပေသည်။
မောင်လာနာ မောင်ဒူဒီသည် လှည့်ပတ်မှုနှင့်၊လှည့်ဖြား၊လှည့်စားမှု၌ကျွမ်းကျင် သောကြောင့် ကျော်ကြားပေသည်။ ၎င်း၏“ရစာအေလ်လိုမာဆာအေလ်”စာအုပ်၌ လည်း မွတ်(စ)လင်(မ်)လူထုအား၊ တည်းတည်းမှတ်မှတ်၊ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ မြဲမြံမှု၊ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်မှုကို လှည့်ဖြားရန် ကြိုးစားမှုနှင့် မွတ်(စ)လင်(မ်) လူထုကြီးအား အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)နှင့် ဝေးကွာအောင် ကြိုးစားထားပေသည်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုသည်မှာ ဤသို့လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ သာဝကကြီး များထံမှမည်သည့် ပုစ္ဆာကိုမျှ၊မမေးမြန်းရန်ဆိုလိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆို ရလျှင်- လည်းကောင်းတို့၏ မိန့်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စံနမူနာအဖြစ်မကျင့်သုံးပဲ၊ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ထံမှသာ ပုစ္ဆာကိုသီးသန့် မေးမြန်းရန် မဟုတ်ပေ။ အရာရာတိုင်းအား သူနေရာနှင့်သူထားတတ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။ အလုပ်တစ်ခုအား တစ်နည်းဆိုရလျှင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုအားကြည့်ရှုသူ, တမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) နှင့်အတူ ထို အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်သည့်စိတ်ဆန္ဒဖြင့် ပြုလုပ်သည်၊ စသည်တို့၏ အဆင့်အတန်း အဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ရုံဖြင့် တမန်တော် မြတ်ကြီး (ဆွ)၏ ဆိုလိုချက် ရည်ရွယ်ချက်များကို မသိရှိ၊ နားမလည်၊ သဘောမပေါက်နိုင်ပေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်-တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်း ဆန္ဒ အာသီသတိုင်းသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ ဝဟီ “ဗျာဒိတ်တော်” များဖြစ်ချေသည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင်- အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ မိန့်ရပ်တိုင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် တိုင်း၊ နှစ်မြို့မှုကို အလ္လာဟ်နဗီသာလျှင် သိရှိသဘောပေါက်နှိင်သည်။ ထို့အပြင် အေလ်မေလာသွန်နီး (علم لدنی) ပိုင်ရှင်များသာလျှင် သိရှိနိုင်ပေသည်။ မနုသာ လူသားတိုင်း၊ သိရှိသဘော ပေါက်နိုင်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အကယ်၍ မနုသာ လူသားတိုင်းသဘောပေါက်မည် ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သည် ဤဘဒ္ဒာ၊ ကမ္ဘာလောက၌ တစ်သိန်း နှစ်သောင်းလေးထောင်သော နဗီတမန်တော် များကို စေလွတ်တော်မူရန်၊ သောင်ရတ်(သ) توریت ၊ ဇဘူးလ် زبور ၊ အင်ဂျီးလ် انجیل၊ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် قرآن مجید များနှင့် တစ်ကွ၊ အခြားကျမ်းငယ်များကို ပို့ချရန်မလိုအပ်ပေ။ တိုက်ရိုက်လူသားနှင်၊့ ဆက်သွယ်ပေမည်။ အလွန်ရှင်းလင်း ပြတ်သား ပေသည်။
မောင်လာနာမောင်ဒူဒီဆပ်၏ အတွေးအခေါ်ထားရှိသူများအား၊ နားလည် သဘောပေါက်စေရန် ဥပမာ-သာဓက၊ တစ်ခုပေးရလျှင် “အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး၊ ဗိသုကာကြီး၊ မဟတ္တမဂန္ဒီ ၏ ဘဝကိုလေ့လာ သုံးသပ် နိုင်ပေသည်။ မဟတ္တမဂန္ဒီ ဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း၊ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနှင့် ရင်ဆိုင်ရကြောင်း၊ ဘာတွေမိန့်ချွေခဲ့ကြောင်းကို ထောင်ပေါင်း များစွာသော သိန်းပေါင်းများစွာသော လူထုသည် တွေ့မြင်ခဲ့ကြပေသည်။ ထို့အပြင် ရဲဘော်၊ ရဲဘက်များသည်လည်း မဟတ္တမဂန္ဒီ နှင့် တစ်ကွ တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့ကြပေသည်။ သို့သော်လည်းပဲ မဟတ္တမဂန္ဒီ နှင့်အတူ၊ တိုက်ပွဲ တိုက်ခဲ့သူများ၊ ဂန္ဒီကြီး ၏ လုပ်ရပ်ကိုမြင်ခဲ့သူများ အားလုံးသည် ဂန္ဒီကြီး ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်၊ ဂန္ဒီကြီး ဘာတွေနှစ်ခြိုက်၊ နှစ်မြို့၊ နှစ်သက်ကြောင်း၊ မနှစ်သက်ကြောင်း ဂန္ဒီကြီး ၏ ရှေ့အနာဂတ်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်၊ အစီအစဉ်များကို ဂန္ဒီကြီး ၏ အနီးကပ်တပည့်များ အချိန်ပြည့် ၄င်းနှင့်အတူ ရှိသောသူများထက် ပို၍ မည်သူမှမသိရှိနိုင်ပေ။ ဤသာဓကသည် အသိဥာဏ်ပိုင်ဆိုင်ထားသော လူသားတိုင်း အတွက် အလွန်ထင်ရှားသောသာဓက တစ်ခုပင်တည်း။
အကယ်၍ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ချွေတော်မူသည်မှာ “ကျွန်ုပ်၏ နောက် ပိုင်း၌ ကျွန်ပ်သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ စာအုပ်၊ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ အနွယ်မွန်၊ မြတ်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) အား မြဲမြံစွာ လက်ကိုင်ထားကြ ကုန်လော့၊ ဤကဲ့သို့ လက်ကိုင်ထားမည်ဆိုလျှင် အကျွန်ုပ်၏ လမ်းစဉ်၊ တစ်မျိုးပြောရလျှင် “ ဒီးနေ ဟက်(က) ” ပေါ်မှလုံးဝ၊ မတိမ်းစောင်း၊ မချွတ်ချော် သွားနိုင်ပေ။”
ဦးနှောက်အသိဥာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရား၏နှလုံးသားပိုင်ရှင်တိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချ နိုင်သည်မှာ ပြဿနာတိုင်း၊ ပုစ္ဆာတိုင်း၊ ဥပဒေ အဟ်ကမ်တိုင်း ကို အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ထံမှသာ ရယူဆည်းပူးနိုင်ပေသည်။ မိမိဘဝ၏ မှတ်ကျောက်အဖြစ် စံနမူနာအဖြစ်၊ ဘဝ တည်ဆောက်နိုင်ပေသည်။ ထောင်ပေါင်း များစွာသော သာဝကကြီးများ၏ ထင်မြင်ချက် လုပ်ဆောင် ချက်ထက် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ထင်မြင်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလေးပြု ဦးစားပေး ရပေမည်။
အကြောင်းသည်ကား- အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) နှင့် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်အား မြဲမြံစွာ လက်ကိုင်ထားရန် မိန့်ချွေထားသောကြောင့်ဖြစ်၏။ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မိန့်ရပ်တိုင်းသည် တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မိန့်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မိန့်ရပ်တိုင်းသည် ထာဝရအရှင်သခင်, အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မိန့်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည့် မောင်လာနာမောင်ဒူဒီဆပ် သည် အဟ်လေ့ဘိုက် (သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) “ ဒီးနေဟက်(က)” အား မွတ်(စ)လင်(မ်) လူထုကြီးနှင့် ဝေးကွာအောင်တိုက်ရိုက် ကြိုးစားထားကြောင်း သိနိုင်ပေသည်။ ယခုလက်ရှိ၊ မျက်မှောက်ခေတ် ကာလ၏ အကျော်အမော် အဟ်လေစွန္နတ် ဂျမာအတ်၏ သာသနာ့ပညာရှင် မောင်လာနာမောင်ဒူဒီဆပ်၏ စာအုပ် များ၊ ရေးသားချက်များ၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ထင်ရှားစွာသိနိုင်သည်မှာ-ယခုခေတ်တိုင် သာသနာ့ ဥပဒေသများ၏ ရေသောက်မြစ်သည် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ထက် သာဝက ကြီးများအား အလေးပေးကြောင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဤအချက်သာသနာ့စာပေ လိုက်စားသူတိုင်း သိရှိပေသည်။ သိလျက်နှင့် မသိယောင် ဆောင်နေသူများလည်း ရှိပေသည်။ (ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍) အချို့ တရားမျှတသည့် နှလုံးသားပိုင်ရှင် စွန်နီ သာသနာ့ပညာရှင်အချို့၏ ရေးသားမှုကို လေ့လာမှတ်သားနိုင်သည်။
အကြောင်းသည်ကား (အဟ်လေ့စွန္နတ်ဂျမာအတ်၏ အဓိက စဟီးစစ်သာ ကျမ်းကြီး ခြောက်ကျမ်းအနက်မှ တစ်ကျမ်းဖြစ်သော “စဟီးသီးရ်မေဇီးကျမ်း” အတွဲ(၂)စာမျက်နှာ ၂၉၈၊ ၂၉၉၊ ပုံနှိပ် ဒါရွလ်ကုရ်အာန်၊ ဂျအ်မေ့အ်မစ်ဂျစ်ဒ်၊ ဒေ(ဟ)လီ အိန္နိယ အူရ်ဒူဘာသာပြန်-အလ္လာမာဆရက်နဇီးရွဟ်ဟက်(က)ဆပ်၊ ကာသရီး၊ ဖွဖ်သီအာလာ ရေးသားသည်မှာ....
တမန်တော်မြတ်ကြီးဟဇရတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ချွေတော် မူသည်မှာ-------
“အိုလူထုအပေါင်းတို့ ကျွန်ှပ်သည် အသင့်တို့အကြား၌ နှစ်ခုသောအရာကို ထားခဲ့တော်မူမည်။ အသင်တို့သည် ၎င်းအရာနှစ်ခုအား မြဲမြံစွာလက်ကိုင်ထားမည် ဆိုလျှင်လုံးဝဥဿုန် လမ်းလွှဲ၊ လမ်းမှားမည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ခုသည်ကား အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် ကျန်တစ်ခုသည်ကား ကျွန်ုပ်၏ အနွယ်တော်မွန် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ဖြစ်ပေသည်။”
ထို့နောက်အူရ်ဒူဘာသာပြန်ဆိုသူ အလာမာဆရက်ဒ် နဇီးရွဟ်ဟက်(က)ဆပ် သည် မိမိသုံးသပ်၊ရှုမြင်ချက်ကို ဤကဲ့သို့ရင်ဖွင့်ထားပေသည်။ ဤဟဒီး(စ်)တော်၌ အပြည့်အဝ စဉ်းစားဆင်ခြင် သုံးသပ်ရန်မှာ- တမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရတ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်အား မိမိ၏အနွယ်တော်မွန် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) နှင့်အတူတကွ အဘယ်ကြောင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ထားခဲ့သနည်း?
၎င်းအရာနှစ်ခု၏ ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း? ကွက်ကွက်၊ ကွင်းကွင်းသိရှိပြီး၊ နားလည် သဘောပေါက်နိုင်သည့် အချက်မှာ-အဟ်လေ့ဘိုက် သေနဗဝီး(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သာလျှင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်အား နားလည် သဘောပေါက်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း သီးသန့်ထင်ရှား စေရန် အမှတ်အသား တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထိုနောက်မိမိ၏ အွန်မသ် (နောက်လိုက် နောက်သားများ) အတွက် အဟ်လေ့ဘိုက် (သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)အား စံနမူနာ မှတ်ကျောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ချေသည်။ သို့သော် အို! ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ ရင်နာဖွယ်ကောင်းလေစွာ! ဖူးစာကံဆိုး သည်မှာ-အဟ်လေ့ဘိုက် (သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ ကုရ်အာန် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် အတွေး အခေါ်နှင့် လုပ်ရပ်၏စံနမူနာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစ္စလာမ်မီးရီဝါယတ် နှင့် လမ်းညွန်မှုများအဖြစ် မတွေ့မြင်နိုင်ပေ။ ထို့နောက် ဤ ဟဒီး(စ်)တော်ဖြင့် သက်သေ- သာဓက ပြုနိုင်သည်မှာ- အစ္စလာမ်သာသနာတွင် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုဖြင့် မည်သူကိုမျှ မြင့်မြတ်သူ အဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ပေ။ အဓိကအချက်မှာ ဿက်ဝါ (သီလသမာဓိ) (အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ မိန့်မှာချက်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် တားမြစ်ချက်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း) သာ မြင့်မြတ်မှု၏ အဆင့်အတန်း၊ အရည်အချင်း အစစ် ဖြစ်ချေသည်။
အကယ်၍ဆရက်(ဒ်)ဖြစ်ပြီးဤကဲ့သို့ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု နှင့်အတူ အစ်(ခ)လပ်
(က)မွန်မြတ်သန့်စင်သော စာရိတ္တ၊ ဿက်ဝါ၊ ပါရေး(စ်)ကာရီ (သီလ၊ သမာဓိ) ရှိသူ၊ အာမာလေဆွာလေ (ကောင်းမွန်၊ မြင့်မြတ်သောလုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်သူ) ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်“နူးရ်ရလ်အလာနူးရ်၊ နေနဲ့လရွှေနဲ့မြ”လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်ချေသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ဆရက်(ဒ်) မဟုတ်သူများ အနေဖြင့်လည်း ပဲသက်(က)ဝါ၊ ပါရေး(စ်) ကာရီရှိသူအဖြစ် ဘဝတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရန် ဂရုပြုရပေမည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ-ကျွန်ုပ်သည်ဆရက်(ဒ်)မဟုတ်၍ ဿက်ဝါ၊ ပါရေး(စ်)ကာရီ နှင့် မသက်ဆိုင်ဟူ၍ မထင်မိစေရန်ဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့ပင် လက်ရှိမျက်မှောက်ခေတ်၌ အချို့ သူများသည် သာသနာဥပဒေများသည် မောင်လာနာ၊ မောင်လာနီများ၊ ဂေါပကများနှင့် စသည့်တို့သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု အထင်မှားနေသော အချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
“အူရ်ဒူ ဘာသာပြန်ဆိုသူ အလာမာ ဆရက်(ဒ်)နဇီးရွတ်ဟက် သည် စဟီးသီးရ်မေဇီး” ကျမ်း ကို ဘာသာပြန်ဆိုပြီး နဖူးစာ ကံဆိုးသူအဖြစ် ရေးသားပြောဆို ကာ ဤကဲ့သို့ ရေးသား သီကုံးထားပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) အသာဟာ (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ကုရ်အာန် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်အတွေးအခေါ် နှင့် လုပ်ရပ်၏ စံနမူနာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစ္စလာမ် မီးရီဝါယတ်နှင့် လမ်းညွန်မှုများအဖြစ် မတွေ့မြင်ရပေ ဟူ၍ ရေးသားထားပေသည်။ မေးခွန်း မေးစရာရှိသည်မှာ- အဘယ်ကြောင့်နည်း? အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ စံနမူနာ၊ လုပ်ရပ်ဘဝ၊ တည်ဆောက်မှုများ အမိန့်ဩဝါဒ တော်များမရှိသလော့? အဘယ်ကြောင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေ မွစ်စလာမ်)၏ စံနမူနာ၊ လုပ်ရပ်၊ ဘဝ တည်ဆောက်မှုများ အမိန့်ဩဝါဒတော်များ မတွေ့ရှိကြသလော့? အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ စံနမူနာလုပ်ရပ်၊ ဘဝတည်ဆောက်မှုများ အမိန့်ဩဝါဒတော်များ ရှိသော်လည်းပဲ၊ အကျိုးအမြတ်အဖြစ် အသုံးမပြု တတ်၍လော့? အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ စံနမူနာ၊ လုပ်ရပ်၊ ဘဝ တည်ဆောက်မှုများ အမိန့်ဩဝါဒ တော်များကို ဖျက်စီးပစ်၍လော့? မှတ်သား စရာပင်တည်း။ ၎င်းကဲ့သို့ ရေးသားရန် သတ္တိရှိသူ၊ ရဲရင့်သူသည်အလွန်ပင် နည်းပါး ပေသည်။
အတိတ်သမိုင်းက ပြဆိုနေသည်မှာ “စကီးဖာ” တွင်(ဟူးကူးမတ်) အစိုးရ အဖြင့် အာဏာသိမ်းယူပြီး နောက်နှင့်အစ္စအလာမ်နိုင်ငံ အများစု၌ အဟ်လေစွန္နတ်၏ ဥပဒေသများ ကနေရာယူထားပြီးနောက် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ ဥပဒေသများ၊ စံနမူနာလုပ်ရပ်၊ ဘဝတည်ဆောက်မှုများသည် အဘယ်ကြောင့် ပျောက်ပြယ် နေရပါသနည်း? မည်သို့သော် တရားခံ၊ ဥပဒေသချိုး ဖေါက်သူ၊ ဆန့်ကျင်သူတို့၏ အမိန့် အာဏာကြောင့် ပျောက်ပြယ်နေရပါသနည်း? သို့မဟုတ် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ စံနမူနာ မှတ်ကျောက်မိန့်ရပ် ဩဝါဒ တော်များနှင့် ဘဝ တည်ဆောက်မှုများရှိနေသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် မျက်မှောက် ခေတ် “ အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရှင်ကြီးများ” အနေဖြင့် အကျိုး၊ အမြတ်၊ မထုတ်ကြပါသလော့? လည်း ကောင်း မေးခွန်း များအားလုံး၏ အဖြေရလဒ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား ဤသို့ဖြစ်၏။
“မြန်မာစကား အရပြောရလျှင် ဗေဒင် သွားမမေးနှင့် ဆန်သာ ကုန်မည် ဖြစ်၏။” အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ အမိန့်အာဏာ ဘဝ တည်ဆောက် မှုများကို ဖျောက်ဖျက်ရန်၊ ဖျက်ဆီးချေမှုန်းရန်အတွက် အာဏာရှင် (အစ္စအလာမ့် အမည်ခံ)တို့သည် အမိန့်အာဏာကို အရေးအကြီးဆုံး အခန်းဏ္ဍအဖြစ် အသုံးပြု ခဲ့ကြပေသည်။ ထိုခေတ် ကာလ၌ ရှိကြကုန်သော သာသနာ့ပညာရှင် အိုလမာကြီးများ သည်လည်းပဲ၊ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ စံနမူနာ မှတ်ကျောက် ဩဝါဒ၊ မိန့်ရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိကြသော်လည်းပဲ၊ အာဏာရှင်တို့၏ ရန်အသွယ်သွယ် တို့ကြောင့် မျက်ကွယ် ပြုကြကုန်၏။
ဤကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးချေမှုန်းမှုသည် အတိတ်ကာလ၌ ဖြစ်ချေ၏။ ယခု မျက်မှောက်ကာလတွင်လည်းပဲ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ စံနမူနာ မှတ်ကျောက် ဩဝါဒမိန့်ရပ် များနှင့်ဘ ဝတည်ဆောက်မှုလုပ်ရပ်များကို ဆက်လက်၍ ဖျက်ဆီးချေမှုန်းရန်၊ ဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးစား နေကြသည်။ ၎င်းတာဝန်ကို “ဝါဟာဘီ (ခ)စလ်ဖီး၊ သဗာလီး(ဂ)ဂျမအတ်”တို့မှာ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်လျက် ရှိပေသည်။ နောက်ဆုံး အဖြေရလဒ်မှာ မအ်ဝေယာ(လ.န)၊ ရဇီး(ဒ)(လ.န)၏ ခေလာဖသ်နှင့် ပတ်သက်၍
``ခေလာဖသ်မအ်ဝေယာဝါယဇီး(ဒ)´´ ( خلا فت معاویه(لع) و یزید(لع
ဆိုသော စာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပေသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလ အချိန်တွင် ယဇီး(ဒ)မလ်အူးမ်၊ လာနတ်သွလ္လာဟ်ကို လမ်းမှန်ပေါ်၌ရှိသူ ဟူ၍ ပြောဆိုနေသူများသည် နောင်တရစွာဖြင့် မိမိ၏ ဦးခေါင်းကို ဦးညွတ်ခြင်း မပြုသည့်အပြင် မွတ်(စ)လင်(မ) လူထုကြီးအား တိုက်ရိုက် အခြေခံကျကျ၊ သင်ခန်းစာများ ပို့ချလျက်ရှိပေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န) (အလိုင် ဟစ်စလာမ်) သခင်ကြီး၏ လုပ်ရပ်၊ ရပ်တည်ချက်များကို ယဇီး(ဒ)(လ.န)နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဆိုလျှင်(معاذالله) အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်ကြီး၏ လုပ်ရပ်သည် မှားယွင်းသည် ဟုသင်ခန်းစာများ စသည်ဖြင့်... ပေး လျက်ရှိ၏။
မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို၊ လုပ်ဆောင်ချက်မဆို မှားယွင်းပါသည်ဟု ပြောဆိုရန် လွယ်ကူသော်လည်းပဲ၊ ၎င်းမှားယွင်းမှုကို သက်သေအထောက်အထားပြရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲ သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်ကြီး၏ လုပ်ရပ်နှင့်၊ ရပ်တည်ချက်အား မှားယွင်းပါသည်ဟု ပြောဆိုနေ ကြသူများသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အားရှာ ဟီးဒ်(شهید) “သာသနာ့အာဇာနည်သူရဲကောင်း” ဖြစ်သည်ကိုလည်းပဲ လက်ခံ အတည်ပြု ကြပေ သည်။ သနားစရာကောင်းလှသည်မှာ မှားယွင်းမှု၌ ရပ်တည်သူ မှားယွင်းမှုကိုလုပ်ဆောင် သူသည် အဘယ်သို့ ရှာဟီးဒ် ဖြစ်သွားသနည်း? ၎င်းအုပ်စု တို့သည် ယခုလက်ရှိ အချိန်အထိ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အား ရှာဟီးဒ်ဖြစ်ခြင်းမှ ငြင်းပယ်ရန် အစွမ်းသတ္တိမရှိကြသေးပေ။ အဟ်လေ့စွန္နတ် ဂျမာအတ်၏ အချို့ သာသနာ့ပညာရှင်ကြီး များသည် အေမာမ်ဟစန် (အလိုင် ဟစ်စလာမ်) သခင်ကြီး နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်ကြီး၏ ရှာဟီးဒ်၊ ရှာဟာဒသ် အား အမှန်တကယ် ရစူလ် လွလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ရှာဟာဒသ် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ယုံကြည်ကြပေသည်။ အကယ်၍ ဤအချက်ကို လေ့လာ သုံးသပ်၊ ဖတ်ရှုလိုလျှင် "سرالشهادتینစေရို(ရှ)ရှာဟာဒသ်သိုင်း(န) စာအုပ်၌ အထင်အရှား လေ့လာ မှတ်သားနိုင်ပေသည်။ အခုလို ပျော့ပျောင်းသည့်ခေတ် (အရောင်ဆိုးထားသည်ခေတ်)ကာလ၌ အဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ((معرفت မအ်ရေဖတ်(သ) ရှိဖို့ရန် အလွန်အရေးကြီး ပေသည်။ အကြောင်းမှာကား ဝါဟာဘီး(ခ)သဗာလီး(ဂ)ဂျမာအတ်၏ ဥာဏ်နီ၊ ဥာဏ်နက် များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်တို့အား ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ် ချေသည်။
ဤကဲ့သို့ အဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) (معرفت)မအ်ရေဖတ် (သ) နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပီပီ ပြင်ပြင်သိရှိ နားလည်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း သည် မွတ်(စ)လင်(မ) ဘာသာဝင်တိုင်း ၏ သမိုင်းပေးတာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက် (သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ မြင့်မြတ်သန့်စင် မှုတို့နှင့်ပက်သက်၍ အဟ်လေ့စွန္နတ်ဂျမာအတ် ၏ ကျမ်းကြီးများ၌ အထင်အရှားတွေ့ရှိ နိုင်ပေသည်။ သိရှိစေရန် အနည်းအကျဉ်း ဖေါ်ပြရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်(စာရေးသူ)သည် အကျဉ်းချုပ် ကျမ်းငယ်ရေးသား သီကုံးရာ၌ ဟဒီးစ်တော်၏ ဟဒီးစ် နံပါတ်ကိုသာ ဖေါ် ပြမည်။ဤဟဒီးစ်တော်များသည် စဟီးသီးရ်မေဇီး၏ ဟဒီးစ်တော်များ ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍သီးရ်မေဇီးဟဒီးစ်ကျမ်း၏အူရ်ဒူဘာသာပြန်သူအလာမာ၏ထူးခြားမှု ရေးသားဖွဲ့ဆိုသီကုံးမှုများရှိလျှင်ဖေါ် ပြမည်။
“တမန်တော်မြတ်မိုဟာမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ်) သခင်ကြီး မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- -
“ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အတွက် ထိုအရာနှစ်ခုကို ထားပေးခဲ့တော်မူမည်။ အကယ်၍ ၎င်းအရာနှစ်ခု၏ သာမာမ် “ဝတ်ယုံ” ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားမည် ဆိုလျှင်(၎င်းအရာနှစ်ခု၏ အမိန့်ဩဝါဒများကို သေသေ ချာချာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း ပြုမည်ဆိုလျှင်) ကျွန်ုပ်၏ နောက် လုံးဝ၊ လုံးဝ၊ ဥဿုန်၊ လမ်းလွှဲ၊ လမ်းမှားသို့ ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းအရာနှစ်ခုသည် ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သန့်စင်လှပေသည်။ ၎င်းအရာနှစ်ခုအနက်-တစ်ခုသည်ကား အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကျမ်းဂန်၊ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် “အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ ကြိုးတော်” ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းကြိုးတော်သည် မိုးကောင်းကင်မှ ပထဝီမြေပြင်အထိ ဆက်သွယ်လျက် ရှိသည်။ ထို့နောက် အကျွန်ုပ်၏ အနွယ်တော်မွန် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ဖြစ်ချေသည်။ ၎င်းအရာနှစ်ခုသည် လုံးဝ၊ လုံးဝ၊ ဥဿုံ၊ ခွဲခွာ၊ ကွဲကွာသွားမည် မဟုတ်ပေ။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု(ကုရ်အာန်နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)) နှစ်ခု စလုံးသည် အရေးပေးရမည့်အရာနှင့် အရေးကြီးသောအရာများ ဖြစ်ပေသည်။ အကျွန်ုပ်ထံ“ဟောင်စေကောင်စဲရ်” အထိ ရောက်ရှိလာပေမည်။ အကျွန်ုပ်မရှိ သည့်နောက် ၎င်းအရာနှစ်ခု၏လမ်း စဉ်ကိုသာမျက်နှာမူရှေ့ရှုကြရမည်။
အူရ်ဒူဘာသာပြန်ဆိုသူ ရေးသားတင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သခင်ကြီးသည် ပြင်းပြင်း၊ ထန်ထန်၊ လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြ၍ မိန့်ချွေ ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)ကို မြဲမြံစွာ အသေအချာ အခိုင်အမာ ဆုပ်ကိုင်ထားရ မည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင်“ဟေဒါရတ်တည်းဟူသောလမ်းမှန်၊လမ်းစစ်”ကိုရှာဖွေလိုလျှင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဘက်သို့ အာရုံပြုရမည်။ အကယ်၍ သန့်ရှင်းသန့်ပြန့်မှု၏ စံနမူနာမှတ်ကျောက် ပိုင်ရှင်ကို ရှာဖွေလိုလျှင် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေ မွစ်စလာမ်)ဘက်သို့ အာရုံပြုရမည်။ အဟ် လေ့ဘိုက် (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) အပေါ် အချစ်မေတ္တာထားခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အီမာန်၏အစိတ်အ ပိုင်းအဖြစ် နားလည် သဘောပေါက်ရမည်။
ဤကဲ့သို့“အာကီသာသက်ဝင်ယုံကြည်ချက်” ထားခြင်းသာလျှင် အစ္စလာမ် မီးဇင် သာကီးအစ္စလာမ်ဘဝ တည်ဆောက်မှု အတွက်စံနမူနာမှတ်ကျေက်ဖြစ်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ် အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်ဝမ်နည်းဖွယ်ကောင်းလေစွာ အွန်မတ် (နောက်လိုက်နောက်သားများ)သည် ဟေဒါရတ် အမှန်တရားကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်ကို မျက်ကွယ်ပြု-ကျောပေး၍ အာဏာမက်မော ယစ်မူးကြပြီး တမန်တော် မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ မိန့်ရပ်ဩဝါဒကိုမေ့လျော့ပစ်ကြပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ မြေးတော် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင် ဟစ်စလာမ်)အား ကရ်ဗလာ(کربلا) ကွင်းပြင်၌ သုံးရက်တိုင်တိုင် အစာရေစာ ဖြတ်တောက်၍ ရှာဟီး(သ)ပြုခဲ့ကြသည်။ ရေစာလဒ်အနွယ်တော်မွန်တွေ၏ လှပတင့်တယ်မှု အလှအပ တရားကို ပျက်စီးပစ်ခဲ့ကြသည်။
سبحان الله ဘယ်လိုအစ္စလာမ်လဲ? ကူးဖာမြို့သူ/ မြို့သားတွေဟာ-မိုဟမ္မဒ် အရဘီ(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ကလ် မာکلمه))ကိုရွတ် ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ပြီးနောက်- ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အပေါ် အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး နောက်-ရေစာလဒ်၏ ပန်းဥယျာဉ်ကို လွင်ထီး၊ လွင်ပြင်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်လည်းပဲ ၎င်းတို့၏ အီမာန်ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ မယူဆကြပေ။ ကောင်းလေစွ!……ဒီစကားဟာရှေးကျပြီး၊ ဟောင်းနွမ်းသွားပြီ ။ ပြီးခဲ့တာတွေလဲ ပြီးသွားပြီ။ ထို့နောက်ယနေ့ခေတ် သာမည တွင်လည်းပဲ ၎င်း(အဖိုးတန်)အရာ နှစ်ခုကို ဘယ်တော့ ဆုပ်ကိုင် ကြမည်နည်း? ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မလွှဲသာ၊ မရှောင်သာ ၍ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို ဆုပ်ကိုင် ထားကြသော်လည်းပဲ အဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)အား အစ္စလာမ် မီးရီဝါယတ်မှသော်၎င်း ဒီးန် (دین)သာသနာ၏ တာဝန်ပိုင်းဆိုင်ရာဏ္ဍတွေမှ၎င်း ထုတ်ပစ်ကြ သည်။ မလွှဲသာ၊ မရှောင်သာ၍ သက်သက် ပါးစပ်ဖြင့်၊ နုတ်ဖြင့်၊ ဓလေ့ရိုးရာတစ်ခု အဖြစ် အချစ်ထားခြင်းနှင့် ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းကို ပြုကြသည်။
အဗ်သွလ်လ္လာဟ်အေဗ်ပနေရှာဖီး(က်)သည် ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာ သခင်မ အား မေးမြန်း လျောက်ထားသည်မှာ သာဝကကြီးများတွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် မည်သူကို အချစ်အထားဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း? ဟဇရတ်(သ) အာအေရှာ မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ဟဇရတ်(သ)အဘူဘာကရ်၊ ထို့နောက်ထပ်၍ မေးမြန်းသည်မှာ ၎င်းနောက်မည်သူကို အချစ်ဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း? အဖြေပေး တော်မူသည်မှာ ဟဇရတ်(သ)အွရ်မာရ်၊ ထို့နောက်ထပ်၍ မေးမြန်းသည်မှာ ၎င်းနောက် မည်သူကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်ပါသနည်း? အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ- အဘူအို ဘိုင်းသာဗင်းဂျာရ၊ ထို့နောက်ထပ်၍ မေးမြန်းလျောက်ထားရာ ၎င်းမေးခွန်းကို နားသောတဆင်၍ ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာ သခင်မ သည်တိတ်ဆိတ် သွားချေသည်။
အူရ်ဒူဘာသာပြန်ဆက်လက်၍ရေးသားသည်မှာ-ဂရုပြုသတိရှိ သင့်သည်မှာ အဗ်သွလ်လ္လာဟ်အေဗ်ပနေရှာဖီး(က်)သည် သာဝကကြီးများ နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်း ခဲ့သည်။ ဟဇ ရတ်(သ)အာအေရှာသခင်မ အဖြေပေးဖို့ တိတ်ဆိတ်သွားခြင်း တွင်ကျန်သော အဖြေမှာ-ဟဇရတ် (သ) အလီရေမွရ်သဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ကရီးမွတ်လာအ်ဟိုဝဂျာ ဟုဖြစ်ပေသည်။ ဟဇရတ်(သ) အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့်ပတ်သက်၍ ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာသခင်မ ကိုယ်တိုင် ရီဝါယတ် မိန့်ဆိုသည် မှာ… တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ အချစ်တကာ့အချစ်ဆုံးသည် ဟဇရတ်(သ)အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ဟဇရတ် (သ) အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် သာဝကကြီးများ၌ ဘွဲ့ရာထူးတွင် အမြင့်ဆုံး ပိုင်ရှင် ဖြစ်၏။
“မုချ ဧကန် မလွှဲ အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သည် ကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)မှ ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည် အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သည် ကျွန်ုပ်၏ နောက်မို့မင်(န်) တို့၏ဝလီဖြစ်၏။” အထက်ပါဟဒီးစ်တော်ကို လေ့လာ သုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းသိရှိရသည်မှာ ဟဇရတ်(သ) အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အား“ဝလီ” အဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်သူသည် မို့မင်(န်) ဖြစ်၍ လက်မခံသူသည် မွတ်စလင်(မ်) ဖြစ်၏။ မိုမင်ဖြစ်လိုသူများ အထူးသတိပြုသင့် ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ဟဇရတ်(သ) အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အား… မည်သည့်မိုနာဖစ်(က်) အရေခြုံတို့သည် အချစ် ထားကြမည်မဟုတ်။ မည်သည့် မိုမင်(န်)သူတော်စင်တို့သည် “မနာလိုစိတ်” အမုန်း ထားကြမည် မဟုတ်ပေ။
ရစူလ်လေအာကာရမ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်- အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သည် ကျွန်ုပ်အား ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ် ၌ (အချစ်၊ မေတ္တာသစ္စာတရား) ထားရန် အမိန့်ပေးတော်မူ၏။ သာဝကတော်များ မှမေးမြန်း လျောက်ထား ကြကုန်၏။ အိုအလ္လာဟ်ရစူလ် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ် လေးဦး အမည်ကို လည်းပဲ မိန့်ကြားတော် မူပါ။ (အကြောင်းသည်ကား-ကျွန်ုပ်တို့လည်းပဲ ၎င်းတို့အပေါ် (အချစ်၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာတရား) ထားနိုင် ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။) တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြား အဖြေပေး တော်မူသည်မှာ… ဟဇရတ် (သ)အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်။ ကိုယ်တော်၏ အမည်ကို တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေ၏ ထို့နောက် ဟဇရတ်(သ)အဘူဇရ်(ရ.သွေ့)၊ ဟဇရတ်(သ)မေခ်သာရ် (ရ.သွေ့)၊ ဟဇရတ်(သ) စလ်မမ်း(န)(ရ.သွေ့) ၏ အမည်ကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ… အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သည် ကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)အား ၎င်းတို့အပေါ်၌ အချစ်ထားရန် အမိန့်ပေးလေသည်။ သတင်း ကောင်းပေးလေသည်။
*** စာရှု သူ ဟဒီးစ်တော်အမှတ် (၁၈၉၁)နှင့်(၁၈၅၃) ကိုယှဉ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ ***
အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မှ ဖြစ်ချေသည်။ အို အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အကျွန်ုပ် ဘက်မှ အသင်သည်၎င်း၊ အသင့်ဘက်မှ အကျွန်ုပ်သည်၎င်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ပေမည်။ မည်သူမျှ တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ဆိုလိုသည်မှာ- ဟဇရတ်(သ)အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) လိုအပ်ချက် (အကူအညီ)ကို တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မှအပ၊ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) လိုအင်ဆန္ဒ (အကူအညီ)ကို ဟဇရတ်(သ) အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)မှအပ မည်သူမျှမပြုနိုင်ပေ။
ရစူလ်လွလ္လာဟ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ထံ၌ “ဖမ်းဆီးရထားသောကျေးငှက်” ရှိသည်။ တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ… “အိုအလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်… အသင်၏ အဖန်ဆင်းခံ၌ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး အဖန်ဆင်းခံ အား ကျွန်ုပ်ထံ ဤ ကျေးငှက်အား စားသောက်ရန် စေလွှတ်တော်မူပါ။” ဟု ဆုတောင်း လေ၏။ ပြီးနောက် ဟဇရတ်(သ) အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ကြွမြန်းလာ၏ ။ ထို့နောက်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် ကိုယ်တော် အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် အတူတကွ ၄င်းကျေးငှက်အား စားသုံး တော်မူကြ လေ၏။
ဤဟဒီးစ်တော်အား လေ့လာခြင်းဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ အချစ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည် မည်သူ၊ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပေသည်။ တရားမျှတသူတိုင်း၊ အယူမသည်း၊ အစွန်းမရောက်သူတိုင်း ရှီအာတွေဟာအလီ၊ အလီ ဘဲလုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်မည် မဟုတ်ချေ။
ကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် အမြော်အမြင်ဆင်ခြင်တုံတရား၏ အိမ်ဖြစ်၍ အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ၎င်းအိမ်၏ တံခါးဝဖြစ်ချေသည်။ ပညာလေ့လာ လိုက်စားသူတိုင်း မှတ်သား လိုက်နာ သင့်ပေသည်။
ရစူလ်လေအာကာရမ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်… ဟဇရတ်(သ)အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်အား အသင် နှင့် ကျွန်ုပ်၏ နီစ်ပတ်(သ်) ပတ်သက်မှုသည် ဟဇရတ်(သ)ဟရွမ်း (အလိုင်ဟစ် စလာမ်) နှင့် ဟဇရတ်(သ) မူစာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) တို့ကဲ့သို့ ဖြစ်ချေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် မဇ်ဂျစ်သေနဘဝီ مسجدنبوی)) ၌ ဟဇရတ်(သ) အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင် ကြီး၏ တံခါးပေါက်မှအပ အားလုံးသောတံခါးပေါက်အား ပိတ်ရန် အမိန့်ပေးလေသည်။
အလ္လာဟ်၏ရစူလ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့် ချွေတော်မူသည်မှာ-ဟစန်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်သည် ဂျန္နတ်“ အမတသုခဘုံ” ၏လုလင်ပျို တို့၏ ဦးဆောင်၊ ဦးသျှောင် ဖြစ်တော်မူ၏။
“အစမားဘင်ဇိုက် မိန့်ချွေတော်မူသည်မှာ- အကျွန်ုပ်သည် ဟစန် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)နှင့် ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်အား တမန်တော် မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ဒူးနှစ်ဘက်တော်၌ တွေ့တော်မူသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ချွေသည်မှာ- ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်၏ သားများ ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်၏ သမီးတော်၏ သားများ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ၎င်းသူနှစ်ဦး ဟစန် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား ကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် အချစ်၊ မေတ္တာ တရားထား တော်မူပါ၏။ အို “ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်- အိုအရှင်- အရှင်ကိုယ်တိုင် သည်လည်း ၎င်းသူ နှစ်ဦးအား အချစ်ထားသူအပေါ်၌ အချစ်ထားတော်မူပါ။
အီရတ်နိုင်ငံ၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်သည် ဟဇရတ်(သ) အေဗ်ပနေအွရ်မာရ်ထံ မေမြန်းလျောက်ထားသည်မှာ-အကယ်၍ အဝတ်အပေါ် ၌ ခြင်၊ သတ္တဝါ၏ သွေးစွန်းသွားလျှင် မည်ကဲ့သို့ ဥပဒေ အမိန့်ရှိပါသနည်း? ဟဇရတ်(သ) အေဗ်ပနေအွရ်မာရ် အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ အိုလူထုအပေါင်းတို့ ၎င်းအား ရှုကြကုန်လော့။ ခြင်၊ သတ္တဝါ၏ သွေးနှင့်ပတ်သက်သော ပြသာနာကို မေးမြန်း၏။ သို့သော် နဘီရေခိုဒါ(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ မြေးတော်ကို ၎င်းတို့သည် ရှာဟီးဒ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ မိန့်ကြားတော်မူသည်ကို ကြားနာရသည်မှာ ဧကန်အမှန်(သားတော်) ဟစန် (အလိုင်ဟစ် စလာမ်) နှင့် ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ကျွန်ုပ်လောက ပန်းဥယျာဉ်၏ ပန်းပွင့်လေးနှစ်ပွင့် ဖြစ်ပေသည်။
ဟဇရတ်(သ)အွမ်မေဇလ်မာ(ရ.သွေ့) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ကျွန်မသည် အိမ်မက်၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) အား ဖူးတွေ့ရသည်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ဦးခေါင်းနှင့် မုတ်ဆိတ်တော်များအပေါ်၌ မြေမှုန့်များ ပေကျံနေသည်ကို ဖူးတွေ့ရသည်။ ကျွန်မသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ် )အားမေးမြန်းတော်မူ၏။
အို - အလ္လာဟ်၏ရစူလ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မြေမှုန့်များ အဘယ်ကဲ့သို့ပေကျံနေရပါသနည်း? တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ ကျွန်ုပ်သည် ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်၏ ရှာဟီးဒ်အဖြစ်ခံယူပြီး နောက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ် သည်။
ရစူလ်လွလ္လာဟ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မင်ဘဲရ် တရားပလ္လင်ပေါ် ကြွမြန်းသွားပြီးနောက် မိန့်ကြား တော်မူသည်မှာ-ဒီအကျွန်ုပ်၏ သား ဟစန်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ဦးသျှောင် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တော်မူ ၏။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သည် ၎င်းအား အုပ်စုနှစ်ခု၏ အလယ်၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ ပေးသူအဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် စွမ်းအား ပေးတော်မူမည်။
ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ဖြစ်ချေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဟို စိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)မှဖြစ်ချေသည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ် စလာမ်) သခင်အား အချစ် ထားသောသူအား ချစ်ခင်မြတ်နိုးတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ မြေးတော်များအနက်မှ ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် မြေးတော်တစ်ပါးဖြစ်၏။
အနစ်ဗင်မာလစ် မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- ကျွန်ုပ်သည် အေဗ်နေဇရသ် (လ.န)၏အနီး၌ ရှိတော်မူ၏။ ထိုအချိန်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်၏ ဦးခေါင်းတော် ယူဆောင်လာ၏။ ထို့နောက် ၎င်း(မလ်အူး(န)) အဗ်နေဇရသ် (လ.န)သည် အေမာမ်၏ နှာခေါင်းတော်အား တုတ်ဖြင့်ရိုက်၏။ ထို့နောက် ပြောကြားသည်မှာ ငါသည် ဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ကဲ့သို့ အလှအပ တရား၌ လှပတင့်တယ်သူ၊ မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ရပေ။ ၎င်းဟိုစိုင်း(န) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ၏ အကြောင်း ဇေကရ် အဘယ်ကြောင့် ပြုကြရသနည်း? အနစ်ဗင် မာလစ်အနေဖြင့် တင်ပြသည်မှာ ရစူလွလ္လာဟ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)နှင့် အများဆုံး၊ အဆင်တူဆုံး သူများ၏ မာတိကာ၌ ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်သည်လည်း တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်ချေသည်။
ဟဇရတ်(သ) အလီကရီးမွတ်လ္လာဟိုဝါဂျဟိုး (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မိန့်ကြား တော်မူသည်မှာ-အေ မာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်သည် ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ရင်ဘတ်တော်မှစ၍ ဦးခေါင်းအထိ၎င်း ဟိုစိုင်း(န)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်သည် ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ရင်ဘတ်တော်အောက်ပိုင်း၌ ၎င်း အများဆုံး အဆင်တူဆုံး ဖြစ်ချေ၏။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ကောင်းကင် တမန်တစ်ပါး သည်၎င်း “ည”၏အလျှင်း မြေပြင်ပေါ်သို့မဆင်းသက်ခဲ့ပေ။ ၎င်း,ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံ ခွင့်တောင်းပြီးနောက် အကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)အား “စလာမ်” ဆုပြုတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဤကဲ့သို့ သတင်းကောင်း ပါးတော်မူ၏။ ဟဇရတ်(သ)ဖွာတေ မာဇဟ်ရာ (အလိုင်ဟာစလာမ်) သခင်မကြီးသည် “ဂျန္နတ်သုခဘုံ” အမျိုးသမီးထု၏ ဦးဆောင်၊ ဦးသျှောင် ဖြစ်ကြောင်း အေမာမ်ဟစန်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင် တို့သည် “ဂျန္နတ်သုခဘုံ”၏ လုလင်ပျိုတို့၏ ဦးစီး ဦးသျှောင် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပေးတော်မူ၏။
ရစူလ်လေအာကာရမ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် အေမာမ်ဟစန်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သခင်ကို မိမိ၏ ပခုံးတော်၌တင်၍ ထားတော်မူစဉ်တစ်ဦး, တစ်ယောက်မှ ပြောကြားသည်မှာ ဘယ်လောက်ကောင်း တဲ့(သည်) စီးနင်းစရာလည်း ဟု ပြောကြား လေ၏။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ချက်ချင်း မြွက် ကြားတော် မူသည်မှာ- စီးနင်းသူ လည်းပဲ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ? ဟုမိန့်ကြား, တော်မူ၏။
ရစူလွလ္လာဟ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် ဟဇရတ်(သ)အလီရေမွရ်သဇာ(အလိုင်ဟာစလာမ်) ဟဇရတ်(သ) ဖွာတေမာဇဟ်ရာ (အလိုင်ဟာစလာမ်) သခင်မကြီး အေမာမ်ဟစန် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သခင်တို့အား မိန့်ကြား တော်မူသည်မှာ- အသင်တို့ မည်သူ့အား တိုက်ခိုက်မည်နည်း? ကျွန်ုပ် သည်လည်းပဲ ၎င်းအားတိုက်ခိုက်မည်။ ထို့အပြင် အသင်တို့ မည်သူဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူမည်နည်း? ကျွန်ုပ်သည်လည်းပဲ ၎င်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြုမည်။
ရစူလ်လေအာကာရမ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် ဟဇရတ်(သ) အလီရေမွရ်သဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်), ဟဇရတ်(သ) ဖွာတေမာဇဟ်ရာ(အလိုင်ဟာစလာမ်)သခင်မကြီး အေမာမ်ဟစန် (အလိုင်ဟစ် စလာမ်) နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်တို့အား ခြုံစောင်အတွင်းသို့ ခေါ်ယူ၍ မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- အို“ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ဤလေးပါးစလုံးသည် ကျွန်ုပ်၏ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)ဖြစ်၏။
ပြီးနောက် အကျွန်ုပ်၏ အထူးသီးခြား သီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား “နေဂျစသ်” အညစ်အကြေး အတွင်းပိုင်း အပြင်ပိုင်းမှ ကင်းဝေးစွာ ထားတော်မူပါ။ ၎င်းတို့အား အကောင်းဆုံး၊ အသန့်ပြန့်ဆုံး၊ အသန့်ရှင်းဆုံး အဖြစ်ထားတော်မူပါ။ ဟဇရတ်(သ) အွလ်မေစလ်မား (ရ.သွေ့) သခင်မ မြေးမြန်း လျောက်ထားရာ ကျွန်တော်မျိုးမသည်လည်းပဲ ၎င်းတို့နှင့်အတူပါဝင်ပါသလော? ဟူ၍ လျောက်ထား ရာ၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) အဖြေပေး မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ အသင်မ သည် လည်းပဲ အသင်မ၏နေရာ မိမိ၏နေရာ၌ကောင်းပေသည်။
ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- ကျွန်တော်မျိုးမသည် ရစူလွ လ္လာဟ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ သမီးတော်ကြီး ဖွာတေမာဇဟ်ရာ(အလိုင်ဟာစလာမ်)သခင်မ ထက်ပို၍ မည်သူကိုမျှ တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ဆင်တူမှု အခြေအနေ၌၎င်း လှပတင့်တယ်ပြီး၊ ပီပြင်လှသည့်ဘဝ၊ တည်ဆောက်မှု၌၎င်း၊ မည်သူကိုမျှမတွေ့ ဖူးချေ။ သခင်မကြီးသည် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)ထံဝယ် လာရောက်သည့်အခါ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် သခင်မကြီးအတွက် မတ်တပ်ထရပ် ပေးတော်မူသည်။ ထို့နောက်သခင်မကြီးအား နမ်းတော်မူသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ်)သည် သခင်မကြီး(သမီးတော်)ထံ ကြွမြန်းလာသည့်အခါ သခင်မကြီး (သမီးတော်)သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝ စလာမ်)အား အရိုအသေ၊ အလေးအမြတ်ပြုရန်၊ မတ်တပ်ထရပ်တော်မူခြင်း၊ နမ်းတော်မူခြင်း၊ ပြုလုပ်ပေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)အား အနီး၌ ထိုင်စေတော်မူ၏။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည်လည်းပဲ မိမိ၏ သမီးတော်သည် မိမိထံကြွမြန်းလာတော်မူချိန်၌ မတ်တပ် ထရပ်ခြင်း၊ နမ်းတော်မူခြင်း အပြင် မိမိအနီး၌ ထိုင်စေတော်မူ၏။ တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မကျန်းမာသောကာလတွင် ဟဇရတ်(သ) ဖွာတေမာဇဟ်ရာ (အလိုင်ဟာစလာမ်) သခင်မကြီးသည် ကြွမြန်းလာပြီး၊ မိမိ၏ ဦးခေါင်းအား ဦးညွတ်၍ တမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)အား နမ်းတော်မူပြီး ငိုကြွေးတော်မူ၏။ နောက်တဖန် ဦးခေါင်း ညွတ်၍ နမ်းတော်မူပြီး ဦးခေါင်း ထောင်တော်မူ၍ ပြုံးရွှင်တော်မူ၏။ ရယ်တော်မူ၏။ ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာ “မိမိနှလုံးသား၌” ပြောကြားသည်မှာ ကျွန်တော်မျိုးမသည် ဖွာတေမာ (အလိုင် ဟာစလာမ်)ကို အမျိုးသမီးများ အားလုံးထက် ဥာဏ်ပညာ အရှိဆုံး အမျိုးသမီး ဟုထင်ခဲ့မိသည်။ သို့သော် “ဒီနေ့”သိရသည်မှာ ၎င်းသည်လည်းပဲ သာမန်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ ဖြစ် ချေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) “ဝဖသ်” ကွန်လွန်သွားချိန်၌ ကျွန်ုပ် “အာအေရှာ” သည် ဖွာတေမာ(အလိုင် ဟာစလာမ်)သခင်မအား မေးမြန်းသည်မှာ- အသင်မသည် အဘယ်ကြောင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မကျန်းမာဖြစ်ချိန် ထိုနေ့တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) အပေါ် ဦးခေါင်းတင်၍ ငိုကြွေးခြင်း၊ ထို့နောက်ပြုံးရယ်ခြင်း သည် အဘယ်ကြောင့်နည်း?
သခင်မကြီး အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ ထိုအချိန်၌ လျို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ရန် မသင့်တော်ပေ။ သို့သော် ယနေ့ ကျွန်ုပ်(ဖွာတေမာ (အလိုင် ဟာစလာမ်)) အသင့်အားပြောပြမည်။ ကျွန်တော်မျိုးမအား တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သတင်းပေးတော်မူသည်မှာ- ကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ “ဝဖသ်” ကွန်လွန်ခြင်း သည် ဤမကျန်းမာမှု၌ အဆုံးသတ်ပေမည်။ ဤသတင်းကို နားထောင်ပြီး ကျွန်မ သည် ငိုကြွေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ထပ်၍ သတင်းပေးသည်မှာ - အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)အနက် ပထမဆုံး ကျွန်ုပ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) နှင့်တွေ့ဆုံမည့်သူ သည် အသင်မ (သမီးတော်) ဖြစ်ချေသည်။ ဤသတင်းနားစွင့်၍ ပြုံးရယ်တော် မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။။
ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာ သခင်မအား မေးမြန်းရာ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)အနီးရှိ အမျိုးသမီးများ၌ အချစ်တကာ့ အချစ်ဆုံးသည် မည်သူဖြစ်သနည်း? အဖြေပေးရာ၌ ဟဇရတ်(သ) ဖွာတေမာဇဟ်ရာ(အလိုင်ဟာစလာမ်) ထို့နောက် ထပ်၍ မေးမြန်းရာ-အမျိုးသား များတွင် အချစ်တကာ့ အချစ်ဆုံးသည် မည်သူ ဖြစ်သနည်း? အဖြေပေးသည်မှာ- ၎င်း၏ခင်ပွန်း ဟဇရတ်(သ)အလီ (အလိုင် ဟစ်စလာမ်) ဖြစ်ချေသည်။ ကျွန်မ ဤအတိုင်းအတာ အထိ သိရှိသည်မှာ-၎င်း ဟဇရတ်(သ)အလီ(အလိုင် ဟစ်စလာမ်) သည် ဧကန်မုချရိုဇာ (ဥပုသ်၊ သီလ) အလွန် စောင့်ထိန်းသူ နှင့် ည များကို အေဘာဒသ်၌ အသုံးချသူဖြစ်လေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- “ဂျန္နတ်သုခဘုံ” ရှိ အမျိုးသမီးများအနက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးများမှာ ဟဇရတ်(သ)ခတီဂျာဗင် သေခါဝါလစ် (အလိုင်ဟာစလာမ်) ဟဇရတ်(သ) ဖွာတေမာဗင် သေမိုဟမ္မဒ် (အလိုင် ဟာစလာမ်) ဟဇရတ်(သ) မဲရ်ရမ်းဗင်သေအေမရမ်း (အလိုင် ဟာစလာမ်)နှင့် ဖေရ်အောင်၏ ဇနီး ဟဇရတ်(သ)အာစီယာ(ရ.သွေ့) တို့ဖြစ်ကြသည်။
အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ မြင့်မြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ကို စဟီးသေရ်မီးဇီးကျမ်းမှ အသင် ရှုစားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း“ဟဒီးစ်” အားလုံးကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ ဝေဖန် ဆုံးဖြတ်မည်။ မိမိနှလုံးသား၌ အမြဲတမ်းအမှန်တရားကို ဦးစားပေးမည် ဆိုလျှင် အထောက်အထား အခိုင်အမာ သိရသည်မှာ-“ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံ” အမျိုးသား အမျိုးသမီးထု၏ ဦးစီး ဦးသျှောင် ခေါင်းဆောင်သည် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သာလျှင် ဖြစ်ချေ၏။ သာဝကကြီးများ သာဝကမကြီးများ သည် “ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံ”၏ ဦးစီး ဦးသျှောင် ခေါင်းဆောင်များ မဟုတ်ကြောင်း သိရပေသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်များကို လေ့လာရှုမြင် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်၊ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင် ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြတ်ပြတ်သားသား တွေ့ရပါသည်။
အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်းကို အပြစ် ငရဲသား အမှားအယွင်း ကျူးလွန်သူ မနုသာလူုသားတို့သည် ခံစားတတ်မည် မဟုတ်ပေ။ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဖို့ ခက်ခဲလှသည့် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက-အဟ်လေစွန္နတ်၏ ကျမ်း၌ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင် ဟေမွစ်စလာမ်)၏ မြင့်မြတ်မှု ကြီးကျယ်ခန့်ညားမှု ရှိနေပါလျက် အဟ်လေစွန္နတ်ဂျမအတ်အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရှင်ကြီးများ အနေဖြင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ထက် သာဝကကြီးများ သာဝကမ ကြီးများကို ဦးစားပေးနေသောအချက်ပင်တည်း ။ ….!!
ကျွန်တော် ပထမပိုင်း၌ တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မောင်ဒူဒီဆပ်၏ ရေးသားမှုကို သုံး သပ်ကြည့်လျှင်- သာသနာ့ဥပဒေသများ သာဝကကြီးများ ထံမှာရယူဆည်းပူးရန် အပြင်း အထန် ကြိုးစားတိုက်တွန်း ထားပေသည်။ မောင်ဒူဒီနှင့် ၎င်းကဲ့သို့ အခြားသော စွန်နီအိုလမာကြီးများ ရေးသားပြောကြားသည်မှာ သာက်ဝါ ရှိသော အပြစ်ငရဲ ရှောင်ကြဉ်သူ ကောင်းမြတ်သူ အဖြစ်ကျော်ကြားသူ၊ သာဝကကြီးများထံမှ- ဟဒီးစ်ကို ရယူရမည်။ ၎င်း (အရည်အချင်းနှင့်) ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လျှင် ၎င်း၏ ဟဒီးစ်တော်များကို ရှောင်ရှားရမည်။ ဤအရေးအသားသည် ထိုက်တန်သော ရေးသားချက်ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်အစစ် “ရှီအာလမ်းစဉ်” နှင့် နီးကပ်စေသော အတွေး အခေါ်၊ အယူအဆဖြစ်ပေသည်။
သို့သော်လည်းပဲ၊ အဟ်လေ့စွန္နတ် တို့်အနေဖြင့် သာဝကကြီးများ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်း၌ ထားခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ မှန်ကန်တိကျသော ကျမ်ကြီးများနှင့် ဆန့် ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားစေရန် ဖေါ်ပြရလျှင် စဟီးသီးရ် မေဇီးကျမ်း ဟဒီးစ်အမှတ်(၁၃၁၂)တွင် ပါရှိသည်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်ကြားတော် မူသည်မှာ- အကျွန်ုပ်၏ အွန်မတ်မှ မြောက်များစွာသော လူထုအား ခေါ်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ညာဘက်သို့ ပို့ဆောင်တော် မူမည်။ ထို့နောက် “အိုအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်” ဤသူများသည် ကျွန်ုပ်၏ သာဝကကြီးများ ဖြစ်ကြကုန်၏။ “အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်” ပြန်လည်၍ ဖြေကြားတော် မူမည်။ အသင် မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) အသင်၏ နောက်ပိုင်း၌ ၎င်းသူတို့သည် (သာဝကကြီးများ) ဘာတွေလုပ်ခဲ့သနည်း? ဆိုတာကို မသိရှိပေ။
ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် ကောင်းမြတ်သော ကျင့်စဉ်၊ ကျင့်ရပ်ကို တည်ဆောက် သူ၊ ဟဇရတ်(သ)အီဆာ(အလိုင် ဟစ်စလာမ်) (အသင့်၏) ဘန်ဒါ ကျေးကျွန်ကဲ့သို့ လျောက်ထားမည်။
ကျွန်ုပ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) သည် ၎င်းတို့နှင့်အတူတကွ ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံး ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ကြည့်ရှုစောက်ရှောက် ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အား အသင်ခေါ်ယူပြီး (ဝဖာသ် ဖြစ်ခြင်း) နောက်အသင်သည် ၎င်းတို့အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော် မူခဲ့သည်။ အို “အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်” အသင်သည် အရာဝတ္တုတိုင်းအား ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်တော်မူသော အရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူသည်။ အကယ်၍ အသင်သည် ၎င်းတို့အား အပြစ်ပေးမည် ဆိုလျှင် ၎င်းတို့သည်, (အသင်၏) ဘန်ဒါ ကျေးကျွန်များ ဖြစ်ကြလေ၏။ အကယ်၍ ခွင့်မလွှတ်မည် ဆိုလျှင်လည်း (ရပေသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်) အသင်သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိ တော်မူသော အရှင်မြတ်(နှင့်) ဆင်ခြင်တုံ တရားရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခါ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- အသင်သည် ၎င်းတို့ အား စွန့်ခွါသွားပြီး နောက်ပိုင်း ၎င်း သူတို့၏ ခြေလှမ်းသည် အမြဲလိုလို အစ္စလာမ် နှင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်သည် ဟိုစ်နေစဟီး(ခ)လှပ မှန်ကန်သော ဟဒီးစ်တော် ဖြစ်၏။
စဟီးသီးရ်မေဇီးကျမ်း စာမျက်နှာအမှတ်(၃၃)နှင့် (၃၄)၌ ရေးသား ထားသည်မှာ-စဟီး(صحیح)မှန်ကန်သော ဟဒီးစ်သည် ဤကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ၎င်းအားဆင့်ပြန်သူ “ရာဝီး” သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ခေတ်ကာလနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေရမည်။ တနည်းဆိုရလျှင်- တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ဟောပြောမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေရမည်။ “ရာဝီး” တိုင်း မှတ်သားဥာဏ် မှတ်သားမှု မှန်ကန်ခြင်း၊ ပတ်ကားမွတ်သကီး ဖြစ်ခြင်းနှင့် ရီဝါယတ်၏ ဆန့်ကျင်မှုများနှင့် လျှို့ဝှက်ချက်များ (အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်း) နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ ကို မထိန်ချန်သူ ဖြစ်ရမည်။(حسن)ဟု ဆိုသည်မှာ လှပပြီး မှန်ကန်မှုအထိ အဆင့် ရောက်နေ သော ဟဒီးစ်တော်ဖြစ်ပေသည်။ ဤဟဒီးစ်တော် အတွင်း ရီဝါယတ်တော်၌ မည်သို့သော လိမ်လည်မှု၊ စွပ်စွဲမှုများ မရှိခြင်း၊ ဤဟဒီးစ်ကို ဒုတိယနည်းလမ်းဖြင့် ရီဝါယတ်ပြန်ဆို ခြင်း ရှိရမည်။ ဆာဟာဘာ သာဝကြီးများသည် သာသနာကို မည်ကဲ့သို့ ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ် ပုံရိပ်အား စဟီးသီးရ်မေဇီးကျမ်း ဟဒီးစ်တော် အမှတ်(၆၂၄)၌လည်း ရှုစား နိုင်သည်။
ဟဇရတ်(သ)အနစ် မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ကျွန်ုပ် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ ခေတ်ကာလ သမယ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ်များ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ကျင့်သုံးခဲ့သော ကျင့်ရပ်များကို ကျင့်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်း တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ကျင့်စဉ် များအနက် အချို့ကို ကျွန်ုပ် မမှတ်မိတော့ချေ။ ဆိုလိုသည်မှာ- ကျင့်စဉ်များ ပြောင်းလဲ သွားကြကုန်သောကြောင့် ဖြစ်ချေ၏။ သာဝကကြီးများ အနေဖြင့် ပြောကြားသည်မှာ- အသင်(အနစ်)သည် နမာဇ်ကို မမြင်ဘူး ခဲ့သလော? နာမာဇ်သည် မိမိ၏အစစ်အမှန် နေရာ၌ ရှိနေပေသည်။ (မပြောင်းလဲပေ) ဟဇရတ်(သ) အနစ်ဖြေကြားသည်မှာ- နမာဇ်အတွင်း၌ အသင်တို့(သာဝကများ)သည် အသစ် အဆန်း ဝါကျများကို မထည့်သွင်း ထားကြကုန်လော့? ထို အသစ်အဆန်း ဝါကျများ အသင်တို့ သိရှိပေသည် .. ဟူ၍ အဖြေပြန်ပေးခဲ့လေသည်။
မက်သပေ သာရိုလ်ဖွရ်ကန် ဂျအ်မေ့အ်မစ်ဂျစ်ဒ် ဒေ(ဟ)လီ ((مکتب دارالفرقان/جامعه مسجد/دهلی မှ စဟီးဘုခါရီးကျမ်း၌ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် စသည်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်လာရှိသော ဟဒီးစ်တော် များကို တစ်ကြိမ်တည်း ဖော်ပြခြင်းပြုလုပ်၍ သဂ်ျသီးဒေဘုခါရီး((تجدید بخاری အမည်ဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းစာအုပ်၏ ဟဒီးစ်တော်အမှတ်(၂၁၂၃)တွင်ရေးသားထားသည်မှာ-ကေယာမတ် (ကမ္ဘာ့တရားစီရင်မည်နေ့)၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သည် အုပ်စု တစ်စုအား ရှုစား ကြည့်ရှုတော်မူမည်။ ထို့နောက် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေ ဟီဝစလာမ်)သည် ၎င်းတို့ကိုမှတ်မိပေသည်။ ဤအုပ်စုသည် ကျွန်ုပ်(မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်))၏ သာဝကကြီးများ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအချိန် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) နှင့် ၎င်းအုပ်စု အခြားမှ ထွက်ပေါ်လာမည်။ ၎င်းသည် ဤအုပ်စုအား ခေါ်ဆောင်သွားမည်။ ကျွန်ုပ် (မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်))သည် မေးမြန်းသည်မှာ - အသင်သည် ၎င်းတို့အား အဘယ်အရပ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်နည်း? ၎င်းအဖြေပေးသည်မှာ-ဂျဟန္နမ် “ငရဲဘုံ”သို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်။ ဘာကြောင့်လဲဟု? ရစူလ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မေးမြန်းတော်မူမည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ် အဖြေပေး သည်မှာ- အို တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ်) အသင်၏ နောက်ပိုင်း၌ ၎င်းသူတို့သည် အမိန့်များကို ချိုးဖေါက်ပစ်ကြ ကုန်၏။ ကျွန်တော်ထင်သည် ၎င်းတို့အထဲမှ အနည်းငယ်သာ လွတ်မြောက်ကြ ပေမည်။ စာရှုသူသည် ဤကျမ်းငယ်ကို အစ အဆုံး ကိုယ် စိတ် နှလုံးဖြင့် ဖတ်ရှု၍ သာသနာ့ ဥပဒေကို မည်သူ့ထံမှရယူ၍ မိမိဘဝကိုတည်ဆောက် သင့်ကြောင်း “ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ လက်ထက် မှစ၍ လက်ရှိ မျက်မှောက်ခေတ်အထိ ထို့နောက် ကမ္ဘာ့တရား စီရင်မည်နေ့အထိ မည်သည့် ဖေရ်ကာ မည်သည့်အုပ်စုသာလျှင် ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက် သေရစူလ်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)ကို ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ တို့ဖြင့် လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း ကျင့်သုံးနေကြောင်း ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်မှန်သည့်သမိုင်းစာမျက်နှာများ လက်တွေသာဓကများ ခိုင်လုံသော ဟဒီးစ်တော် များက အဆက်မပြတ် ဖော်ပြနေပေသည်။ ရှီအာတို့၏ ခေါင်းဆောင် အယာသွလ္လာဟ် အလ်အွစ်(ဇ)မာအေ မာမ်ခိုမေနီး(ရ.ဟ)သာလျှင် ကျမ်းတော်မြတ် နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)အား တိုက်ခိုက်ပြီး စော်ကားသူ မဟုတ် မတရားစွပ်စွဲ ရေးသားထားသူ မသူတော်၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မလ်အူး(န) စလ်မန်းရူရ်ှဒီး အား သေဒဏ် အမိန့်ပေးခဲ့ပေသည်။ ဤအမိန့်ကို ခေါင်းဆောင် အယာသွလ္လာဟ် အလ်အွစ်(ဇ) မာအေမာမ်ခိုမေနီး(ရ.ဟ) အနေဖြင့်(၆)လ နေပြီးမှပေးခဲ့ပေသည်။ အင်မတန် အမြော်အမြင် ကြီးမားလှပေသည်။
(၆)လအချိန်မယူခဲ့လျှင်၊ အမည်ခံ၊ အရေခြုံမွတ်(စ)လင်(မ)များအတွက်၊စောဒကတက်ဖို့ လမ်းပွင့်သွားပေမည်။ ငါတို့သေဒဏ်ပေးမလိုလုပ်နေစဉ်၊ခိုမေနီးက၊ပေးလိုက်တာ……
ယခုမျက်မှောက်၌လည်းမွတ်(စ)လင်(မ)များဘက်မှ၊အထူးသဖြင့်စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ့် (ရှီအာ အေမာမ်မီယာ )များဖက်မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီးတတ်စွမ်းသည့်ဖက်မှ သာ သနာပြု နေသည်မှာ ရှီအာ အေမာမ်မီယာ မရ်ဂျာများ ၊ အိုလမာ ၊အာလင်မ်များ တာ ဝန် သိ ၊မိုမေနီ၊မိုမေနတ်များ ဖြစ်ကြောင်း ရပ်သိ၊ရွှာသိ၊အများသိပင်တည်း
ဤအတွက်ကြောင့် .... ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကျင့်ရမည်မှာ ...
ဘာသာပြန်ဆိုသူ ကျွန်တော်၏ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့
ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် စူရဟ်နေစာ၊ အာယတ်တော် အမှတ် ၈၀၊ အစောင်(၅)တွင် မြတ်အလ္လာဟ် မိန့်တော်မူထားပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်စကားပြေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
``အကြင် မည်သူမဆို မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဟဇရတ်(သ)မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်))၏ အမိန့်နာခံမှု ပြုမည်ဆိုလျှင် မြတ်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်နာခံသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေမည်။´´
ပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ အခြားတစ်နေရာ စူရပ်အန်ဖာလ်၊ အာယတ်တော် အမှတ် ၂၄၊ အစောင်(၉)တွင်လည်း ထပ်ပြီး မြတ်အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အနေဖြင့် မိန့်ထားပြန်လေသည်။ ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပာယ်သည်ကား . . .
``အို အီမာန် သဒ္ဓါတရား သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင် နှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) ၏ အသံအပေါ်(အမိန့်တော်များအပေါ်) နာခံကြောင်း ထွက်ဆို ပါလေ။ . . . တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မှ ခေါ်ခြင်း၊(အမိန့်ပေးခြင်း) သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ခေါ်ခြင်း၊(အမိန့်ပေးခြင်း) မည်လေ၏။ ကိုယ်တော်မြတ် နှင့် ``ဗိုင်အသ်´´ပြုခြင်းသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် နှင့် ``ဗိုင်အသ်´´ပြုခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ပြင် စူရဟ်ဖသ်ဟ် အာယတ်တော် အမှတ် ၁၀၊ အစောင်(၂၆)တွင်လည်း ဤကဲ့သို့ လာရှိလေ၏။
``ထိုသူများအနေဖြင့် အသင် (တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်))နှင့် `ဗိုင်အသ်´ပြုခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် နှင့် `ဗိုင်အသ်´ပြုခြင်းဖြစ်လေ၏။
အထက်ဖော်ပြပါ အာယတ်တော်များ၏ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ အသက် ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်တွင် လေ့လာမှတ်သားနိုင်ပေသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ကိုယ်တော်မြတ် ဖြစ်ခဲ့သည့် မြေခဲအား မိမိ(အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်)ကိုယ်တိုင် ပစ်တော်မူခဲ့သည်ဟု မိန့်လေ၏။
``အို - တမန်တော်! ဤလုပ်ရပ်(ပစ်မှု)သည် အသင်လုပ်ခဲ့သည်၊ ပစ်ခဲ့သည် မဟုတ်ချေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် အနေဖြင့် လုပ်ခဲ့၊ ပစ်ခဲ့ခြင်း မည်လေသည်။´´
ကြည့် - စူရဟ်အန်ဖာလ်၊ အာယတ်တော် အမှတ် ၁၇၊ အစောင်(၉)
တဖန် စူရဟ်နဂ်ျမ် အာယတ်တော် အမှတ် ၃ နှင့် ၄၊ အစောင်(၂၇)တွင် မိန့် ထားလေ၏။
``၄င်း တမန်တော်မြတ် အနေဖြင့် မိမိ၏ စိတ်အာသီသ၊ ဆန္ဒဖြင့် ဘာမျှ မဆိုချေ။ ၄င်းသည် ၀ဟီဗျာဒိတ်တော် နှင့်အညီသာ ပြောကြားလေသည်။´´
ဤသို့ဆိုလျှင် . . . တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်တော်မူခဲ့သည့် . . .
“ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အသင်တို့အား အရာနှစ်ခုကို အမာနသ်(အလွဲသုံးစား မပြုရန်) အဖြစ် ထားပေမည်။ ၄င်းအရာနှစ်ခုအား မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသမျှ ကာလပတ်လုံး၊ လုံးဝ ဥဿုန် လမ်းလွှဲ၊ လမ်းမှားမည် မဟုတ်ချေ။ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုထက်ပို ၍ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပေသည်။ တစ်ခုသည်ကား မိုးကောင်းကင်မှ မြေပြင်ဘက်သို့ တွဲထားသော `ရဟ်မသ်´၏ ကြိုးတော်၊ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဖြစ်ပေသည်။
နောက်တစ်ခုသည်ကား ကျွန်ုပ်၏ အိမ်တော်သူ/အိမ်တော်သားများ (အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်))ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာနှစ်ခုသည် တစ်ခု နှင့် တစ်ခု မည်သည့်အခါမျှ ကွဲကွာကြမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်နှင့် လာရောက် ၍ ကောင်စဲရ်ရေကန်တော် ၌ လာဆုံကြပေမည်။ အသင်တို့(အွန်မသ်သားများ)သည် ကျွန်ုပ်မရှိသည့်နောက်ပိုင်း ၄င်းအရာနှစ်ခုနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် (စောင့်မျှော်)ကြည့်ရှုရမည် ဖြစ်ပါသည်။”
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရတ်(သ)မိုဟမ္မဒ်(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)သခင်
လေ့လာကြည့်ရှုရန် - စဟီးသီးရ်မေဇီးကျမ်း/စူနန်ကျမ်း၊ အတွဲ(၅)၊စာမျက်နှာ(၆၆၃)၊ ဟဒီးစ်တော်အမှတ်-၃၇၇၈၈။
ဟဒီးတော်သည်လည်း အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ဟောကြားမှု၊ မိန့်ရပ် ဖြစ်သွားချေ၏။
အထက်ပါသြ၀ါဒတော်မွန် အရ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်များ အားလုံးသည် -
- ကုရ်အာန်နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)ကိုသာလျှင် မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရမည်။ . . .
- ၄င်းအရာနှစ်ခုအား မြဲမြံစွာ မဆုပ်ကိုင် နိုင်လျှင် လမ်းလွှဲ၊ လမ်းမှားတွင် ရှိနေပေမည်။ . . .
- ဤအရာနှစ်ခုအား မြဲမြံစွာ မဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့လျှင် တစ်နေ့ မြတ် တမန်တော် မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊ မြတ်အလ္လာဟ်၏ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကို မလွဲမသွေ ခံရပေလိမ့်မည်။
အတိတ်နှင့်လက်ရှိတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်၏ အိမ်တော်သူ အိမ်တော်သားများအား မြဲမြံစွာ လက်ကိုင် ထားပြီးနောက် ၄င်းတို့၏ သြ၀ါဒတော်မွန်များကို နာခံကျင့်သုံးခဲ့သူများ၊ ကျင့်သုံး နေသူများမှာ ရှီအာအေမာမ်မီယာများ သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ဤအတိုင်း ပင်တည်း။ . . .
အထက်ပါဟဒီးတော်အရ ကုရ်အာန်နှင့်ဆွာဟာဗာတော်များကို မြဲမြံစွာ လက်ကိုင် ထားဖို့ မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်သားထင်ရှားနေပါသည်။
ပြီးနောက် မိမိတို့အသိဥာဏ်ရှိလျှင် ရှိသလောက် ပညာတတ်လျှင် တတ်သလောက် အချက်များစွာကို ဖြည့်စွပ် စဉ်းစားလေ့လာနိုင်ပါသေးသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ရှီအာ အေမာမ်မီယာသာလျှင် မှန်ကန်သည့် ဖေရ်ကာ နှင့် စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ်အောင်မြင်သူများ ဖြစ်ချေသည်။ ပိုမိုပြီး တိကျခိုင်လုံ စေရန် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ)၏ ဟဒီးစ်တော်မှန် တစ်ပါးအား အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ဟဒီးတော်မှန် မှာ ဤသို့ ဖြစ်ချေသည် -
`အို! အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အသင်နှင့်အသင်၏ ရှီအာ(အေမာမ်မီယာ)သည် သာလျှင် အောင်မြင်သူ (ဂျန္နတ်သီ)များ ဖြစ်ချေသည်။´´
- အေဗ်နေဟဂ်ျရ်ရေမက္ကီ ရေးသားထားသည့်`စ၀ါအေကိုလ်မိုဟ်ရေကာကျမ်း´ စာမျက်နှာ-၉၆။
- န၀ါဗ်ဆွဒီးကီး ရေးသားထားသည့် `သဖ်စီးရေဖသ်ဟိုလ်ဗရန်းကျမ်း´ အတွဲ(၁၀)၊ စာမျက်နှာ-၃၂၃။
- အလာမာရှောင်ကာနီရေးသားထားသည့် `သဖ်စီးရေဖသ်ဟိုလ်ကဒီးရ်ကျမ်း´ အတွဲ(၅)၊ စာမျက်နှာ-၆၂၄။
- အလာမာဂျလာလွတ်ဒီး(န)စူယူသီး ရေးသားထားသည့် `ဒူရွလ်မန်ရှူးကျမ်း´ အတွဲ(၆)၊ စာမျက်နှာ-၃၇၉။
- အထက်ပါ အာလင်မ်များသည် ရှီအာအေမာမ်မီယာ အာလင်မ်များ မဟုတ်ကြချေ။
- မပြောကောင်း မဆိုကောင်း၊ ဟဒီးစ် မမှန်ခဲ့လျှင် ဤ အဟ်လေ့စွန္နတ်၏ အကျော်အမော်အာလင်မ်များ အနေဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ရေးသားခဲ့ကြမည် မဟုတ်ချေ . . .
ရိုးသား ဖြူစင်စွာ ၀န်ခံရေးရမည့်ဆိုလျှင်-
အို! အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ၏ နေရာတွင် အခြားပုဂ္ဂိုလ် သာဝကတော်ကြီးများ၊ ရှီအာအေမာမ်မီယာ နေရာ၌ အခြားစကားလုံးကို တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်) မိန့်တော်မမူခဲ့ကြောင်း နှင့် မည်သည့်စစ်မှန်သည့် စဟီးကျမ်းအကျော်အမော် အာလင်မ်များ၏ မှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရမည် မဟုတ်ချေ။ မတော်တဆ တွေ့ခဲ့လျှင်လည်း နောက်ပိုင်းမှ လုပ်ကြံရေးသား သည့် လုပ် ဟဒီးစ်တု သာလျှင် ဖြစ်ပေမည် . . .
ဤအတွက်ကြောင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝအာလေဟီဝစလာမ်)၏ ရှီအာ အေမာမ်မီယာအပေါ်နှင့် ကုရ်အာန် နှင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)ကိုသာလျှင် မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ဟောထားသည့် ဟဒီးတော်ရှိနေပါလျက် . . .
အဖေထက် သားတစ်လကြီး သကဲ့သို့ တစ်နည်း -
ကျောက်ကောင်း၊ ကျောက်မြတ် ရောင်းသည့်နေရာတွင် ဆေးရိုးတန်က ၀င်ပြီး ပြဿနာရှာခြင်း၊ ရိုးသားမှု မရှိခြင်း၊ လိမ္မာမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ အမုန်းတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင်း၊ မျိုးဖြင့် တစ်မျိုး-
အကျိုးမရှိ၊ မယဉ်မကျေး၊ အရှက်သိက္ခာကင်းမဲ့ပြီး အမှန်နှင့်အမှား အသေအချာ မသိရှိဘဲ တစ်သွင်. . .
ရှီအာ အေမာမ်မီယာ- ရှီအာ ဂျာအ်ဖရီယာ အား ကာဖေရ်၊ မိုရ်ှရေက်… ဟု ပြောဆို ရေးသား ဟောကြားသူများအတွက် အံ့သြစရာပင် . . .
ရင်လေးစရာပင် … သနားစရာပင် တည်း …
ဤကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဟဒီးမှန်များ ရှိလျက် ဗြောင်လိမ်၊ ဗြောင်စား လုပ်ခဲ့၊ လုပ်နေ၊ လုပ်မည် ဖြစ်သဖြင့် . . . မျက်စိချို့ယွင်း၊ ပျက်စီးနေသူများ မဖြစ်နိုင်ပါ. . . နှလုံးသား နှင့် စိတ်ထား ယုတ်ညံ့သူများသာ ဖြစ်ပါသည်. . .
သူယုတ်မာ ၊ မသူတော်များသာ ဖြစ်ပေသည်။ …
ရှီအာ အေမာမ်မီယာ- ရှီအာ ဂျာအ်ဖရီယာ အား ကာဖေရ်၊ မိုရ်ှရေက်၊ လမ်းမှား စသည်ဖြင့် ပြောဆို ရေးသား ဟောကြားသူများသည် ကမ္ဘာနှင့် မြန်မာ မွတ်စလင်များအကြား စနစ်တံဖြုတ်ထားသောဗုံးများနှင့် တူပေသည်။
ဤဘာသာပြန်ကျမ်းငယ် နှင့် အချို့ ကောက်နှုတ်ချက်များအား အနှိုင်းမဲ့၊ အတုမဲ့၊ မြတ်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် အနေဖြင့် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှင့် ကဗဲရ်အတွက် နှစ်မြို့၊ လက်ခံတော်မူပါစေ . . . အာမီး(န)
ဗေဟက်ကေ ကုရ်အာန်၊ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၀အာလေ မိုဟမ္မဒ် (အ.စ)…